Hanti-dhawrka Guud Ee Somaliland Oo Xabsiga U Taxaabay Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Warfaafinta | Araweelo News Network (Archive) -
Hanti-dhawrka Guud Ee Somaliland Oo Xabsiga U Taxaabay Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Warfaafinta
Hargeysa(ANN)Hanti-dhawr guud ee qaranka Somaliland , ayaa maanta xabsiga u taxaabay sarkaal ka tirsan wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland oo ahaa
agaasimaha lacagta iyo xisbaadka ee Telefishanka Qaranka Xasan Maxamuud Maxamed, kaas oo lala xidhiidhiyay musuq-maasuq.
Hanta-dhawrka qaranka, ayaa talaabadaa qaaday kadib markii ay shalay galeen wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta, taas oo ay ka bilaabeen baadhitaan rasmi ah oo ku waajahan qaybaha ay ka kooban tahay wasaaraddu.
Ma jiro war ku saabsanan arrintaa oo la xidhiidha sababta hanta-dhawrka u galay wasaaraddaa, balse Ilo-wareedyo laga helay qaar ka mid hawlwadeenada wasaaradda, ayaa sheegay in baadhitaanku la xidhiidho kadib markii ay soo baxeen tuhuno Xisaabaad oo lays dhaaf dhaafiyay, kuwaas oo uu daba socdo xafiiska Hanti-dhawrka Qaranku.
Dhinaca kale baadhitaankaa ayaa bilaabmay. Kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in Kharashka ay wasaaradaasi ka hesho Dawladda Dhexe iyo waaxaha kale ee dakhligu kasoo galo ee kala duwan oo ay ka mid yihiin Barnaamijyada iyo xayaysiisyada ka baxa Idaacadda, Telefishanka iyo qaybta wargeyska dawladu ee ay baahiyaan aanay marin qaab xisaabeedka dawladda ee wasaaradda maaliyada, kuwaas oo dakhli xoog ahi ka soo galo. Laakiin aan la ogayn qaabka loo maamulo dakhligaa, balse baadhitaanada hanta-dhawrka guud ayaa mudooyinkan danbe u muuqda mid aan wax natiijo ahi kasoo bixin oo ku dhamaada natiijo la’aan, taas oo lala xidhiidhiyo inaan marka horeba goobaha iyo hay’addaha ay ku bartilmaameedsadaan ay yihiin kuwo aanay ka madhnayn ujeedooyin siyaasadeed.